Tierra, nke Eloy Moreno: na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ịdị mfe na mmalite | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Na 2020, onye edemede Spanish Eloy Moreno gosipụtara akwụkwọ akụkọ ya Ụwa, akụkọ banyere ụmụnne abụọ na nkwa nna ha kwere ha. Nkata ahụ na-ekpughe oke oke nke ụwa n’azụ igwe onyonyo na ihe nkiri n’ime mmemme ahuru n’ụwa niile. N’ikpeazụ, onye edemede ahụ ji akụkọ na-akpali akpali gosi mmekọrịta dị n’etiti akụkọ abụọ ahụ.
Somefọdụ ndị na-akatọ akwụkwọ ọgụgụ emeela ka ọ pụta ìhè na ọ bụ eziokwu na etu esi ede akwụkwọ ọgụgụ ọhụụ. Ma ọ bụghị obere, ihe ndị dị ka telivishọn ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta na-ekpebi mmepe nke ibé ahụ. N'ihi nke a, Ụwa na-anọchi anya ụzọ dị mma nke iji gakwuru onye na-agụ ya ọnọdụ mmadụ dị mgbagwoju anya ma na-emegiderịta onwe ya.
1 Synopsis nke Tierra, nke Eloy Moreno dere
1.1 Play maliteghachi
2.1 Akwụkwọ banyere oge mmadụ
2.2 A obi ụtọ ederede maka miri echiche
3 Echiche banyere akwụkwọ a
4 Banyere onye edemede, Eloy Moreno
4.2 Akwụkwọ Eloy Moreno
Nkọwa nke ỤwaEloy Moreno dere
Otu nwoke nwere ike dị ukwuu na igwe onyonyo na ụlọ ọrụ ihe nkiri na-ekwe ụmụ ya abụọ nkwa obere nkwa, Nelly na Alan. Kpọmkwem, okwu ahụ bụ na ọ bụrụ na ụmụnne a agbachaa egwuregwu, nna ha ga-emejupụta agụụ ha kacha hụ n'anya. Agbanyeghị, egwuregwu ahụ kwụsịrị: n'otu ntabi anya, afọ iri atọ gafere, ha wee nwee nnukwu mgbanwe n'ezinụlọ.
(Wa (Mbipụta B)
Ya ke dimkpa, Nelly na-anata igbe dị omimi nke nwere ekwentị, mgbanaka na igodo. Ekele maka ekwentị ahụ, ya na nwanne ya nwoke ọzọ (onye ọ na-ekwughị okwu ya) na ga-amaliteghachi egwuregwu ahụ agwụbeghị. Nke a bụ otu ohere ohere maka protagonist ahụ si mezuo ọchịchọ ya, ebe ọ bụ na Alan enwetala ya ogologo oge gara aga.
N'otu oge, egwuregwu ahụ ga-ejikọta na a eziokwu Ihe ngosi onyonyo nke ụwa nile na-elebara mmepe ya anya. Ihe omume a gbasara mmadu asatọ ndi sitere na uwa rue uwa Mars. Ka ọ dị ugbu a, na Iceland, Nelly na nwanne ya nwoke mụtara ikpughe akụkụ dị iche iche nke ọnọdụ mmadụ na mbara ala nke nọ n'ihe ize ndụ.
Akwụkwọ a ọ bụghị nanị na ọ na-akọ akụkọ jikọtara ya na ndị ọzọ, kamakwa na-atụ aro ọnọdụ na-egosipụta mgbe niile banyere eziokwu dị ugbu a. N'otu aka ahụ, akụkọ a haziri na obere isi na akụkọ ndị ọzọ na-eme ka ndị na-agụ akwụkwọ chọọ ịmata ihe ga-eme na peeji na-esonụ. Eloy Moreno karịa ihe ọ bụla nzube gị nke dobe onye nlere anya.
O doro anya na nzọ nke onye edemede ahụ bụ ime ka onye na-agụ ya nwee obi ụtọ na akụkọ abụọ dị na akwụkwọ ahụ. Nke ahụ bụ, ma ụmụ nwoke abụọ a natara nkwa wee too iche na ibe ha, yana nke ndị sonyere na televishọn. N'ikpeazụ, a na-achọpụta nwayọọ nwayọọ na ndụ niile na ndụ niile ahụ.
Akwụkwọ banyere oge mmadụ
Maka echiche ya dị ọhụụ ma dị ọhụrụ, Ụwa Ọ bụ akwụkwọ siri ike idobe mgbe ịmalichara ya. Site na ụdị ọhụụ a, Eloy Moreno na-agba mbọ ikpughe isiokwu a na ụdị nkwukọrịta mara maka ọha mmadụ nke narị afọ XXI. Na ederede, elekwasị anya na-adaba na ọnọdụ mmadụ, nke a hụrụ site na oge akara hyperconnection akara.
Na mgbakwunye, a na-ekwu ọtụtụ isiokwu ndị siri ike site na ngwakọta —N'ụzọ doro anya, - kwụ ọtọ na arụmụka doro anya. Isiokwu ndị a tụlere sitere na mbibi gburugburu ebe obibi nke ụmụ mmadụ mebiri ụwa, na omume omume (o doro anya na) etinyere na netwọk mmekọrịta.
A obi ụtọ ederede maka miri echiche
En Ụwa, Eloy Moreno na-ekpughe akụkọ nke nwere ike ịmepụta njikọta na edemede mmetụta ọmịiko nke ndị na-agụ akwụkwọ site na ọtụtụ ins na outs - ihe ijuanya, maka ọtụtụ akụkụ. Onye ọ bụla n'ime ha, n'oge ụfọdụ, na-aghọ nsogbu dị oke mkpa. Dịka ị nwere ike ịgụ na azụ azụ nke akwụkwọ ahụ, ịchọrọ ịchọta eziokwu ahụ, ma, "nsogbu nke ịchọ eziokwu bụ ịchọta ya na amaghị ihe iji ya mee."
Maka ebumnuche ndị a, ọ bụ akwụkwọ na-akpọ gị òkù ịchọpụta ezigbo ndụ ndị a kọrọ akụkọ ha, na, ikekwe olile anya, onye na-agụ ya na-atụgharị uche na nke ha. N'ụzọ dị otú ahụ Ụwa site na Eloy Moreno na-agba mbọ ime ka ndị na-agụ akwụkwọ nso n'akụkụ kachasị mgbagwoju anya nke ọnọdụ mmadụ.
Echiche banyere akwụkwọ a
Ndị nkatọ na-eto Eloy Moreno ikike ijide mmasị onye na-agụ ya, n'agbanyeghị na isi akwụkwọ akụkọ ahụ ga-ekpughe n'oge na-adịghị anya. Voicesfọdụ olu, n'aka nke ọzọ, na-ekwu maka “kacha ere dị mfe ”, n’ihi atụmatụ (mfe) azụmaahịa nke akwụkwọ. Otu ọ dịla, niile ọnụahịa banyere Ụwa ha bụ eziokwu: na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ịdị mfe na mbido.
Banyere onye edemede, Eloy Moreno
Eloy Moreno bụ onye injinia teknụzụ na njikwa njikwa amụrụ na Jenụwarị 12, 1976 na Castelló de La Plana, Valencian Community, Spain. Ọ bụ onye gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Jaume I na obodo ya. Ọ bụ ezie na ọ gụchara akwụkwọ ọ malitere ịrụ ọrụ na ngalaba kọmpụta, ọ raara ndụ ya nye akwụkwọ.
Na 2011, ahuhu ya dubara ya itinye aka n'ime akwukwo ozi mwepụta nke akwụkwọ mbụ ya (bipụtara onwe ya), Mkpịsị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gel. Ihe odide a ghọrọ mmalite mmalite akwụkwọ ọgụgụ na-aga nke ọma, nke mere ka mgbasa nke mbipụta ya ndị ọzọ. Eleghị anya, ọtụtụ nnabata ya n'etiti ọha mmadụ bụ n'ihi ụdị edemede ya enweghị atụ.
Emechaa mbipụta nke mmalite ya, na nnabata nke ndị na - agụ akwụkwọ, Eloy Moreno were nnukwu nkwado. Kemgbe ahụ, onye edemede Spanish akwụsịbeghị ọrụ edemede okike ya, karịsịa akụkọ na akwụkwọ akụkọ.
N'aka nke ọzọ, ode akwukwo aburula onye ama ama —Na mgbakwunye na ike ya na soshal midia— n’ihi na ọ rụrụ ụzọ gasị eji ede akwụkwọ. Moreno, ugboro abụọ ma ọ bụ ugboro atọ n’afọ, na-aga eleta ndị mmadụ n’ebe o debere akwụkwọ ọgụgụ ya. Tinyere nke a, ọ na-akuzi nkuzi akwụkwọ na uloru, yana isonye dika ndị juri na asọmpi edemede na obodo ya.
Akwụkwọ Eloy Moreno
Mgbe Mkpịsị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gel (2011), Eloy Moreno bipụtara Ihe m chọtara n'okpuru sofa (2013), ihe ịga nke ọma ọzọ na-ebipụta akwụkwọ sụgharịrị gaa n'ọtụtụ asụsụ. Mgbe e mesịrị, onye edemede Castellón laghachiri na desktọọpụ iji bipụta ya Akụkọ iji ghọta ụwa (2015), nke, ọ malitere nke abụọ na nke atọ, na 2016 na 2018, n'otu n'otu.
Ka ọ dịgodị, Moreno bipụtara akwụkwọ nke atọ ya na 2015, Onyinye ahụ, na kwa rụpụtara ihe ịga nke ọma ozugbo, n'agbanyeghị na ọ bụ mbipụta ole na ole. N'otu aka ahụ, akwụkwọ akụkọ Invisible (2018) nwetara ezigbo ọnụ ọgụgụ ahịa. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, o nweela mbipụta iri na itoolu ruo taa yana ọtụtụ nsụgharị. Ihe ọhụrụ si Eloy Moreno bụ Ụwa (2020).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Tierra, nke Eloy Moreno dere